Saaxiibkayga ayaa ii sheegay in uu siigaystay. Maxaa laga waddaa midaasi? – Tips for refugees
Previous Previous post: Waalidiintaydu waxay i bareen in haweenayda wanaagsan ay tahay in ay guursato nin. Kadibna waxay dhallaysaa carruur. Laakiin anigu ma doonayo in aan guursado. Miyaan ahay anigu haweenay wanaagsan?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir. Jirkayga guud ahaan wuu isbedelayaa. Midaasi ma tahay mid caadi ah?